I-Arduino + Bluetooth, izibonelo nezixazululo zamaphrojekthi wethu womuntu siqu | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Ukuxhumana phakathi kwamabhodi we-elekthronikhi kuyinto esiyidingayo sonke ngesikhathi esithile kumaphrojekthi ethu. Ngakho-ke, amaphrojekthi afana ne-IoT noma i-Intanethi Yezinto avele ukudala amadivayisi ahlakaniphile. Kepha zonke zidinga ibhodi enoxhumo olungenantambo njengeBluetooth noma i-wireless. Okulandelayo sikutshela ukuthi yini i-Arduino + Bluetooth nokuthi yini amathuba noma amaphrojekthi angenziwa ngalobu buchwepheshe.
1 Yini i-Bluetooth?
2 Yimaphi amabhodi e-Arduino ane-Bluetooth?
3 Yini esingayenza nge-Arduino + Bluetooth?
4 I-Wifi noma i-Bluetooth ye-Arduino?
Mhlawumbe manje wonke umuntu uyazi ubuchwepheshe be-bluetooth, ubuchwepheshe obungenantambo obusivumela ukuthi sixhumanise amadivayisi ndawonye ukuthumela idatha phakathi kwawo ngokushesha nangempumelelo asikho isidingo sephoyinti lomhlangano noma i-router. Lobu buchwepheshe bukhona kumadivayisi amaningi eselula, kusuka kumathebulethi kuya kuzinsiza ezifana namahedfoni kuya kuzinto ezifana nama-smartphones noma ama-desktop computer.
Ubuchwepheshe be-Bluetooth kanye nokuxhumeka okungenantambo kubalulekile ku-Intanethi Yezinto, hhayi nje ngoba kuyingxenye eyisisekelo kepha ngoba ukuhlukahluka kwamadivayisi ane-Bluetooth kwenza inethiwekhi noma i-data mesh phakathi kwamadivayisi kunembe kakhulu futhi akuxhomekile ezindaweni eziningi ukuhlangana. ama-node wedatha. Kukho konke lokhu, ubuchwepheshe be-bluetooth bukhona kakhulu kumaphrojekthi ane-Arduino, IoT futhi nakumamodeli wakamuva we-Raspberry Pi.
Kunezinguqulo eziningi ze-bluetooth, ngayinye iyathuthuka kwangaphambilini futhi yonke inikela ngemiphumela efanayo kodwa ngendlela esheshayo nangokusetshenziswa kwamandla okuncane. Ngakho-ke, I-Arduino + Bluetooth iyinhlanganisela esetshenziswa kakhulu emhlabeni wezobuchwepheshe.
Noma kunjalo, okwamanje ayikho imodeli ye- Arduino UNO equkethe i-bluetooth ngokuzenzakalela nokuthi noma yimuphi umsebenzisi angasebenzisa lobu buchwepheshe ngokuzenzakalela. Lokhu kuyinto okufanele siyithole ngokusebenzisa izihlangu noma amakhadi wokunweba noma ngamamodeli akhethekile asuselwa ku-Arduino Project.
Muva nje ukusetshenziswa okusha kudalelwe amadivayisi anobuchwepheshe be-Bluetooth, lokhu kusekelwe ekusebenziseni amadivayisi we-bluetooth njengamabhekhoni noma amadivayisi alula akhipha isinali njalo. Lolu hlelo lwamabhekhoni noma ama-beacon lwenza noma iyiphi idivaysi ehlakaniphile iqoqe lolu hlobo lwezimpawu futhi ivumele i-geolocation kanye nolwazi oluthile olutholakala kuphela ngobuchwepheshe obufana nokuxhumeka kwe-3G noma nendawo yokungena engenantambo.
Yimaphi amabhodi e-Arduino ane-Bluetooth?
Njengoba sishilo ngaphambili, akuwona wonke amabhodi e-Arduino ahambisana ne-bluetooth, kunalokho, akuwona wonke amamodeli ane-bluetooth eyakhelwe ebhodini lawo. Lokhu kungenxa yokuthi ubuchwepheshe abuzalwanga bukhululekile njengobunye ubuchwepheshe futhi akuyona yonke imisebenzi ye-Arduino eyayidinga i-bluetooth, ngakho-ke kwathathwa isinqumo wehlisa lo msebenzi ezivikelweni noma kumabhodi wokunweba akhona futhi angaxhunyaniswa kunoma yiliphi ibhodi le-Arduino futhi usebenze ngokufana nokuthi kufakwe ebhodini le-mama. Ngaphandle kwalokhu, kunezinhlobo ezine-bluetooth.
Imodeli ethandwa kakhulu futhi yakamuva ibizwa ngokuthi i-Arduino 101. Lokhu ipuleti kwenzeka ibhodi yokuqala ye-Arduino ene-bluetooth, ebizwa nge-Arduino Bluetooth. Kulezi zingcwecwe ezimbili kufanele sizengeze i-BQ Zum Core Ibhodi le-Arduino elingelona elangempela kodwa kususelwa kule phrojekthi futhi kunemvelaphi yaseSpain. Lawa mabhodi amathathu asuselwa ku-Arduino Project futhi anekhono lokuxhumana nge-bluetooth. Kepha akuyona ukuphela kwendlela njengoba sishilo. Kunamanye amapuleti amathathu esandiso Bangeza umsebenzi we-bluetooth. Lezi zandiso Babizwa nge-Bluetooth Shield, Sparkfun bluetooth Module ne-SeedStudio bluetooth Shield.
Amabhodi ane-Bluetooth ekwakhiweni okuyisisekelo, lawo ashiwo ngenhla, angamadivayisi asesisekelo se- Arduino UNO kungezwa imodyuli ye-bluetooth exhumana nebhodi yonke. Ngaphandle I-Arduino 101, imodeli eshintsha kakhulu maqondana namanye amabhodi e-Arduino ngoba inokwakhiwa okungama-32-bit, inamandla kakhulu kunamanye amamodeli ngaphakathi kwe-Arduino Project. Noma empeleni, inani lamapuleti lehliswe kakhulu ngoba imodeli ethile ayisathengiswa noma isatshalaliswa futhi singayifinyelela kuphela ngokwakhiwa kwayo ngobuciko, njengoba kunjalo nge-Arduino Bluetooth, esingayifinyelela kuphela ngemibhalo yayo.
Ukukhethwa kwezandiso noma Izihlangu ze-Bluetooth zithakazelisa kakhulu ngoba zivumela ukusetshenziswa futhi. Lokho wukuthi, sisebenzisa ibhodi ukwenza iphrojekthi ethile esebenzisa i-bluetooth bese singasebenzisa ibhodi kabusha kwenye iphrojekthi engenayo i-bluetooth ngokumane nje siyekise ukwandiswa. Ingxenye engemihle yale ndlela ukuthi izandiso zenza noma iyiphi iphrojekthi ibize kakhulu ngoba kufana nokuthi uthenge amabhodi amabili e-Arduino yize empeleni lilodwa kuphela elizosebenza.
Yini esingayenza nge-Arduino + Bluetooth?
Kunamaphrojekthi amaningi lapho singasebenzisa khona ibhodi ye-Arduino kepha kukhona okumbalwa okudinga ezokuxhumana ngocingo. Njengoba okwamanje singathola noma iyiphi idivayisi ehlakaniphile ene-bluetooth, singashintsha noma iyiphi iphrojekthi edinga ukufinyelela kwe-inthanethi nebhodi eline-Arduino Bluetooth futhi sithumele ukufinyelela kwe-inthanethi nge-bluetooth. Nathi singakwazi dala izipikha ezihlakaniphile sibonga amabhodi e-Arduino + Bluetooth noma dala amabhikhoni ukuthola indawo ngokwendawo. Akunasidingo sokusho izesekeli ezinjengamakhibhodi, igundane, ama-headphone, imakrofoni, njll, ngoba njengamanje noma iluphi uhlelo lokusebenza lusebenza kahle ngobuchwepheshe be-bluetooth.
Ezinqolobaneni ezidumile njenge Okuhlelekile singathola amaphrojekthi amaningi asebenzisa i-bluetooth ne-Arduino futhi amanye amaphrojekthi angasebenzisi i-Arduino + Bluetooth kepha angasebenza ngayo nezinguquko ezifanele.
I-Wifi noma i-Bluetooth ye-Arduino?
I-Wifi noma i-bluetooth? Umbuzo omuhle abaningi abazozibuza wona, ngoba kumaphrojekthi amaningi okwenziwa ukuxhumana kwe-Wi-Fi, ukuxhumana kwe-Bluetooth nakho kungakwenza. Ngokuvamile, kuzofanele sikhulume ngezinzuzo namaphuzu amabi wabo bobabili ubuchwepheshe, kepha kulokhu, kumaphrojekthi ane-Arduino, kufanele sibheke into ebaluleke kakhulu: ukusetshenziswa kwamandla. Ngakolunye uhlangothi, kufanele ubheke ukuthi yimaphi amandla esinawo futhi ukusuka lapho unqume ukuthi sisebenzisa i-Wi-Fi noma i-Bluetooth. Ngaphezu kwalokho, kufanele ubone ukuthi siyakwazi yini ukungena kwi-Intanethi noma indawo yokungena, ngoba ngaphandle kwalokho, ukuxhumana okungenazintambo akukuhle kakhulu. Okuthile okungenzeki nge-bluetooth, engadingi i-inthanethi, kuphela into yokuxhuma kuyo. Unikiwe Lezi zinto ezimbili kufanele zikhethe ukuthi ngabe iphrojekthi yethu izophatha i-Arduino + Wifi noma i-Arduino + Bluetooth.
Ngokwami, ngicabanga ukuthi noma iyiphi inketho ilungile uma sinamandla kagesi amahle nokufinyelela kwi-Intanethi, kepha uma singenayo, bengizokhetha ngokwami ​​i-Arduino + Bluetooth, engadingi ubuchwepheshe obuningi nokucaciswa kwakamuva okulondoloziwe amandla futhi asebenza kahle ekusebenziseni. Nawe Yibuphi ubuchwepheshe ongabusebenzisela amaphrojekthi akho?
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » I-Arduino + Bluetooth